မန္တလေးတောင် - မန္တလေး | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
မန္တလေးတောင်ထိပ်ပေါ်မှာအဓိကစေတီတော်ဟာစုတောင်ပြည်စေတီတော်ဟုခေါ်တွင်ခြင်းဖြစ်သည် (ထို့အပြင် Sutaungpyae စေတီတော်ဟုခေါ်တွင်). အဆိုပါစေတီတော်အရှေ့မှာရှိတဲ့ရှမ်းတောင်များထံမှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမြင်များကမ်းလှမ်းသမျှသောကြောင့်ပတ်ပတ်လည်ပြေးကျန်ကြွင်းရှိပါတယ်, ဧရာဝတီမှပတ်ပတ်လည်တောင်ထဲမှာမန္တလေးနှင့်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး (ဧရာဝတီ) အနောက်နိုင်ငံများတွင်မြစ်နှင့်မင်းကွန်း. ဒါကြောင့်ကြည်လင်တဲ့ကောင်းကင်ပြာသည်ဆိုပါကသင်ကမင်းကွန်းဆီသို့ဦးတည်ဧရာဝတီမြစ်ကူးရှာနေတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့နေဝင်ချိန်နှင့်အတူအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်.
သငျသညျမန္တလေးတောင်ထိပ်ရ options နှစ်ခုရှိ, သင်လေးဖုံးလွှမ်းဖို့အတွက် walkway မဆိုတက်လမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်သင်စီး / ထိပ်ပေါ်မှာတလမ်းလမျးခရီးကိုတက်မောင်းနှင့်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ၏ခြေရင်းနားမှာကားကိုပန်းခြံမှာရောက်လာခြင်းနှင့်စေတီတော်ရန်သင့်အားယူနိုင်ရန်စက်လှေကားကိုသုံးနိုင်သည်.
သငျသညျထိပ်အထိလမ်းလျှောက်ဖို့လေးလမ်းကြောင်းရှိ. မွောကျ (အကွောငျး 25 မိနစ် – နည်းနည်းမတ်စောက်သော, ကြည့်ဖို့ဘာမျှမ), အနောက် (15 မိနစ် – မတ်စောက်သော, ကြည့်ဖို့ဘာမျှမ), တောင် (အဓိကလမ်းကြောင်း – အမျိုးအနွယ်ကောင်းသော, အကွောငျး 35 မိနစ် – လမ်းကိုအပေါ်အမြင်များနှင့်အတော်ကြာစေတီပုထိုးများ) နှင့်အရှေ့တောင် (အကွောငျး 40 မိနစ် – အမျိုးအနွယ်ကောင်းသော, လမ်းအများအပြားစေတီပုထိုးများ – ဝက်လမ်းတောင်ပေါ်တက်တောင်ပိုင်းလမ်းကြောင်းအတူတက်ပူးပေါင်းမည်).
ညာဘက်ကျောက်ဖြူ Taw Gyi စေတီတော်နောက်ကွယ်မှ့ 10 ကြိမ်မြောက်နှင့် 68 လမ်းထောင့်အပေါ်တလမ်းတည်းဖြင့်လမျးခရီး၏ညာဘက်မှ 10th Street, အတွက်နှစ်ခုကြီးမား chinthe ခြင်္သေ့အကြားအဓိကတောင်ပိုင်းလမ်းကြောင်းက start ကိုယူပြီး. ဒါဟာနူးညံ့သိမ်မွေ့ဖြစ်ပါသည် 35 မိနစ်လမ်းလျှောက်တက်ခြေလှမ်းများ၏စာရေးနှင့်အတူဖို့အတွက် walkway ဖုံးလွှမ်း. သင်ကလမ်းတလျှောက်တွင်အများအပြားသေးငယ်စေတီပုထိုးများလွန်သွားပါလိမ့်မယ်နှင့်နေသောလူသွားလမ်းအပိုင်းအချို့ကို souveniers နှင့်စေားရောင်းအများအပြားဒေသခံတွေရှိ. တစ်ကြွင်းသောအရာရပ်တန့်နှင့်ရှိသည်သောနေရာများအများအပြားရှိပါတယ်. ရေတစ်ပုလင်းကိုယူ.
အဆိုပါတောင်အာရှနှင့်အရှေ့တောင်ဖို့အတွက် walkway အဆိုပါလမ်းလျှောက်၏ကျန်ရှိသောဘို့တနေသောလူသွားလမ်းသို့ပေါင်းစပ်တောင်ပေါ်တက်အကြောင်းတစ်ဝက်လမ်း. Up ကိုရှေ့ဆက်သူ၏လက်ရုံးနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ရပ်နေသည်ကိုဗုဒ္ဓရှိပြီးသော Shweyattaw စေတီတော်ကြီးပြင်းသည်နှင့်နောက်ကျောမန္တလေးညွှန်ပြ. ဒဏ္ဍာရီဗုဒ္ဓပထမဦးဆုံးဒီပွဲချင်းပြီးရပ်သောအခါသူမန္တလေးယခုဘယ်မှာမှထောက်ပြနှင့်နှစျတှငျကပြောသည်ကြောင့်ရှိပါတယ် 2400 ဗုဒ္ဓဘာသာပြက္ခဒိန် (1857အေဒီ) ကြီးစွာသောမြို့မန္တလေးတောင်၏ခွမှာကြီးပြင်းမယ်လို့. အမှန်စင်စစ်ထိုသို့ပြုကြသည်. မင်းတုန်းမင်းအတွက်မန္တလေးမြို့ created 1857 သူကအမရပူရကနေမန္တလေးရန်သူ၏မြို့တော်ကိုပြောင်းရွှေ့လာသောအခါ.
နောက်ထပ်တက်သင်ကပတ်ပတ်လည်အချို့ထူးဆန်းတဲ့ရုပ်ပွားတော်ရှိကြောင်းသေးငယ်တဲ့စေတီတော်ဖြတ်ပြီးလာကြလိမ့်မည်. တဦးတည်းစန္ဒာ Muhki သည်. ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအရ ogress ဗုဒ္ဓအားပူဇော်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ရင်သားကိုပယ်ဖြတ်ကရှိပါတယ်. ဗုဒ္ဓဒီတော့သူကသူမအတွက်ဆုခခြံမည်ဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်ပြုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် 2400 တစ်ဦးမဟာအရှင်မင်းကြီးဖြစ်လာသဖြင့်, သူမမင်းတုန်းမင်းအဖြစ်ဝငျစားခဲ့သည်. အဆိုပါဘီလူးရှင်ဘုရင်နှင့်အတူတူပင်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်နှင့်အချို့သောတိရစ္ဆာန်များ၏ရုပ်ပုံများကိုအပေါ်မိမိတပ်များ၏အနည်းငယ်သည်အခြားရုပ်ပွားတော်ရှိပါတယ် (ယုန်, အိမျမွှောငျ, ကြက်သား) ဗုဒ္ဓ၏အမျိုးမျိုးသောရောက်လာတာဖြစ်ပြီးကိုယ်စားပြုတပါတည်းယူဆောင်.
ထိုအရပ်မှထိပ်မှာစုတောင်ပြည်စေတီတော်တက်သွား. အဆိုပါစေတီတော်သူ့ဟာသူကြက်သရေနှင့်သင်စေတီတော်၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုး, ရေးသားချက်များပေါ်မှာရှိသမျှပေါင်းစုံအရောင်နည်းနည်းမှန်အုပ်ကြွပ်ခြင်းဖြင့် dazzled ပါလိမ့်မည်တစ်နေသာသောနေ့ဖြစ်၏လျှင်. မှန်အုပ်ကြွပ်နှင့်အတူမြို့ရိုးပေါ်မှာပြုသောအမှုတချို့ကလှပသောရုပ်ပွားတော်များနှင့်အနုစိတ်အလုပ်. ထိုအခါခမ်းနားအမြင်များအတွက် ယူ. မျှော်လင့်ကောင်းတစ်ဦးနေဝင်ချိန်. ဒါဟာခရီးသွားဧည့်သည့်နေဝင်ချိန်အဲဒီမှာသွားအတူမြင့်မားတဲ့ရာသီအတွက်နည်းနည်းစည်ကားလာနိုင်ပါတယ်. တစ်နေဝင်များအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမရပူရမှာတောင်ပိုင်းမန္တလေးတွင်ဦး-ပိန်တံတားမှာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းစည်ကားလာတယ်။.
မောင်း – မန္တလေးတောင်ကိုတက်စီး
68 နှင့် 10 လမ်းထောင့် (ရုံ chinte ခြင်္သေ့၏လက်ဝဲမှ) မန္တလေးတောင်ထိပ်မှတက်ခငျြးကသောတလမ်းလမ်းရဲ့ start ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာမန္တလေးတောင်လမ်းဟုခေါ်သည်. အဘယ်သူသည်မှန်းဆခဲ့ကြလိမ့်မယ်. အဆိုပါတောင်ကုန်းမြင့်မားသော 250m ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါခရီးစဉ်ကိုဖြစ်စေကားဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်, motobike သို့မဟုတ်စက်ဘီး (သငျသညျတောင်ကုန်းတောင်တက်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်). သငျသညျထိပ်မှာရောက်လာသည့်အခါယာဉ်ရပ်နားမော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်စက်ဘီးအဘို့အလက်ဝဲနေရာတစ်နေရာလည်းမရှိ. အဲဒီမှာလျောက်ပတ်သောစျေးပေါအစားအစာများအားဝတျပွုကွောငျးကိုဤနေရာတွင်အများအပြားအသေးစားစားသောက်ဆိုင်နှင့်စျေးဆိုင်ဖြစ်ကြပြီးအချို့မန္တလေးကျော်ဆင်းရှာဖွေနေကောင်းသောအမြင်များရှိ.
ကားကိုပန်းခြံထဲကနေညာဘက်ကိုသွားနှင့်ထိပ်မှာစေတီတော်မှသုံးအဆင့်ဆင့်တက်သွားရန်စက်လှေကားမျှော်စင်ယူ. စက်လှေကားချွတ်ရတဲ့ပြီးနောက်သင်ပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ် 1,000 ကျပ်ငွေ ($1) ကင်မရာကြေး. အဆိုပါချစ်စရာကောင်းတဲ့စေတီတော်နှင့်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်မှအဆင်းလှသောအစ်မအမြင်များရှာဖွေစူးစမ်းခံစားကြည့်ပါ.
နှိမ့်ချကားကိုပန်းခြံမှပြန်ရရန်စက်လှေကား၏လက်ဝဲဖို့ဓာတ်လှေကားယူ, သငျသညျခဏအညီရပ်တည်ရန်ရှိစေခြင်းငှါ. သင်သည်တာရှည်အလုံအလောက်စောင့်ဆိုင်း အကယ်. သူတို့ကမကြာခဏနေဝင်ချိန်ပြီးနောက်ဆင်းစက်လှေကားမှပြောင်းလဲအဖြစ်ပြန်ဆင်းစက်လှေကားယူနိုင်မည်အကြောင်း. မိုဃ်းလင်းစဉ်အတွင်းကသာတက်.
တက်ဆင်းလမ်းကိုနှစ်ဦးစလုံးလေထန်များမှာ, တစ်ခုတည်းလမ်းသွားနှင့်တလမ်း. ကားကိုပန်းခြံ Leave နှင့် 66 လမ်းအပေါ်ထွက်ပေါက်လမ်းဆင်းကိုဆက်လက်. ညာဘက် Turn နှငျ့သငျကျော 66 နှင့် 12 လမ်းထောင့်အပေါ်တော်ဝင်နန်းတော်ကျုံး၏ထောင့်မှလာကြလိမ့်မည်.
သငျသညျမန္တလေးတောင်နေရာချထားအထောက်အကူပြုရန် Google မြေပုံရည်ညွှန်း, မန္တလေး – Google Maps ကို
attribute – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid = 22688551